Ukuhlolwa kwe-FDA kuqinisekisa i-oatmeal, i-Baby Foods iqukethe izinsalela zombulali we-Monsanto Weed Killer
Posted on September 30, 2016 by UCarey Gillam
I-US Food and Drug Administration, eqala ngokuthula ukuhlola ukudla okuthile kwezinsalela zamakhemikhali okubulala ukhula axhumene nomdlavuza, ithole izinsalela emikhiqizweni ehlukahlukene ye-oat, kufaka phakathi okusanhlamvu oku-oat okusobala nokunambitheka kwezingane.
Idatha ehlanganiswe ngusokhemisi we-FDA futhi eyethulwe kwamanye amakhemikhali emhlanganweni owawuseFlorida ukhombise izinsalela zesibulala-zinambuzane esaziwa ngokuthi yi-glyphosate ezinhlotsheni eziningana zokusanhlamvu kwe-oat, okubandakanya izinhlamvana zebhanana- nezinhlobo ezinambitheka zikabhanana. IGlyphosate ibuye yatholwa ku- "cinnamon spice" oatmeal osheshayo; "Ushukela omaple brown" oatmeal osheshayo kanye ne "peach kanye nokhilimu" imikhiqizo ye-oatmeal esheshayo, kanye neminye. Emiphumeleni yesampula eyabiwe, amazinga asukela kokutholakele emikhiqizweni ehlukahlukene ye-oat ephilayo eya ezingxenyeni eziyi-1.67 ngesigidi, ngokusho kwesethulo.
IGlyphosate, okuyisithako esiyinhloko ku-Roundup herbicide kaMonsanto Co., iyisibulali sokhula esisetshenziswa kakhulu emhlabeni, nokukhathazeka ngezinsalela ze-glyphosate ekudleni okutshalwe ngemuva kokuba iWorld Health Organisation ngo-2015 ithe ithimba lochwepheshe bomdlavuza bamazwe omhlaba lizimisele i-glyphosate iyi- kungenzeka i-carcinogen yomuntu. Abanye ososayensi baphakamise ukukhathazeka ngokuthi ukusetshenziswa okunzima kwe-glyphosate kuyithinta kanjani impilo yabantu kanye nemvelo.
I-EPA igcina ukuthi ikhemikhali "akunakwenzeka" ukuthi lidale umdlavuza, futhi selisungule amazinga okubekezelela izinsalela ze-glyphosate kuma-oats nokunye ukudla okuningi. Amaleveli atholwe yi-FDA kuma-oats awela ngaphakathi kwalezo zivunyelwe ezivumelekile, ezenzelwe ama-oats ezisethwe yi-EPA ngo-30 ppm. Izwe laseMelika livumela kakhulu izinsalela zeglyphosate ekudleni kunamanye amazwe akuvumelayo. E-European Union, ukubekezelelana kwe-glyphosate kuma-oats kungama-20 ppm.
IMonsanto, ethola cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zamarandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi- $ 15 emalini etholwa minyaka yonke evela kwimikhiqizo esekwe ku-glyphosate, isize ukuhola i-EPA ekubekeni amazinga okubekezelelana kwe-glyphosate ekudleni, kwathi ngo-2013 yacela futhi yathola ukubekezelelana okuphezulu kokudla okuningi. Le nkampani isungule izitshalo ezakhiwe ngofuzo ezenzelwe ukufuthwa ngqo nge-glyphosate. Ummbila, ubhontshisi, i-canola noshukela ama-beet konke kwenziwa ngezakhi zofuzo ukumelana nokufuthwa nge-glyphosate.
Ama-oats awakhiwe ngezakhi zofuzo. Kepha iMonsanto ikhuthaze abalimi ukuthi bafafaze ama-oats nezinye izitshalo ezingezona izakhi zofuzo ngemithi yokubulala ukhula yayo esekwe eglyphosate esekwe ngaphambi kwesikhathi sokuvuna. Umkhuba ungasiza ukoma futhi kuphele ukuvuthwa kwesitshalo. "Isicelo sokulawula ukhula ngaphambi kokuvuna kuyisu elihle kakhulu lokuphatha hhayi kuphela ukulawula ukhula oluhlala njalo, kodwa nokwenza lula ukuphathwa kwesivuno futhi siqale phambili isivuno sonyaka ozayo," kusho iMonsanto Umhlahlandlela wokubeka ngaphambi kokuvuna.
ECanada, ebalwa nabakhiqizi be-oat abakhulu kunabo bonke emhlabeni futhi ingumhlinzeki omkhulu wama-oats e-United States, izinto zokumaketha zeMonsanto zithola izinzuzo ze-glyphosate emasimini e-oat: yokufaka isicelo kuzo zonke izinhlobo ze-oat - kufaka phakathi i-milling oats eyenzelwe ukusetshenziswa ngabantu. ” IGlyphosate ibuye isetshenziswe ngabalimi be-oat base-US. I-EPA ilinganisela ukuthi kusetshenziswa cishe amakhilogremu ayi-100,000 we-glyphosate minyaka yonke ekukhiqizeni ama-oats ase-US.
IGlyphosate ibuye isetshenziswe kukolweni ngaphambi nje kokuvuna ngale ndlela, kanye nakwezinye izitshalo. Uphiko loMnyango wezoLimo e-US olwaziwa nge-Grain Inspection, Packers & Stockyards Administration (GIPSA) beluhlola ukolweni ukuthola izinsalela ze-glyphosate iminyaka ngenhloso yokuthekelisa futhi seluthole izinsalela ngamaphesenti angaphezu kwama-40 wamakhulu amasampula kakolweni ahlolwe isabelomali sika-2009, 2010, 2011 nango-2012.
Noma i-FDA minyaka yonke ihlola ukudla kwezinsalela zezinye izinhlobo eziningi zemithi yokubulala izinambuzane, yeqe ukuhlolwa kwezinsalela ze-glyphosate amashumi eminyaka. KwakungoFebhuwari walo nyaka kuphela lapho kusho i-ejensi kuzoqala ukuhlaziywa kwezinsalela ze-glyphosate. Lokho kwenzeke ngemuva kokuthi abacwaningi abaningi abazimele beqale bezenzela izivivinyo zabo futhi ngathola i-glyphosate kuhlu lwemikhiqizo yokudla, kufaka phakathi ufulawa, okusanhlamvu kanye ne-oatmeal.
Abalawuli beMonsanto nabaseMelika bathe amazinga e-glyphosate ekudleni aphansi kakhulu ukuthi angahumushela kunoma yiziphi izinkinga zempilo kubantu. Kodwa abagxeki bathi lezo ziqinisekiso azisho lutho ngaphandle kokuthi uhulumeni empeleni alinganise lawo mazinga njengoba enza ngamanye ama-pesticides.
Futhi abanye abakholelwa ukuthi noma yiliphi izinga le-glyphosate liphephile ekudleni. Ngasekuqaleni konyaka, iTaiwan ikhumbule ngaphezu kwamakhilogremu we-130,000 we-oat izimpahla ngemuva kokuthola izinsalela ze-glyphosate. Futhi uDanielle Cooper ohlala eSan Francisco wafaka icala ngoMeyi 2016 befuna isimo sesigaba sokulwa neQuaker Oats Co ngemuva kokutholakala kwezinsalela ze-glyphosate emikhiqizweni yale nkampani, esetshenziswa yizigidi zabathengi njenge-cereal kanye namakhekhe okubhaka nokunye okuphekwayo. UCooper uthe ulindele ukuthi le mikhiqizo ene-oat, ebhalwe ukuthi “100% Yemvelo,” ingabi nezibulala-zinambuzane.
“IGlyphosate iyinto eyingozi, ubukhona nobungozi bayo okumele budalulwe, kusho icala.
UQuaker Oats uthe noma yimiphi iminonjana ye-glyphosate etholakala emikhiqizweni yayo iphephile, futhi imi ngekhwalithi yemikhiqizo yayo.
Ukubulala Amagciwane Ngezinyosi
Ngaphezu kwama-oats, i-FDA nayo ekuqaleni kwalonyaka amasampula ahlolwe uju lwase-US ngezinsalela ze-glyphosate futhi kutholakale wonke amasampuli aqukethe izinsalela ze-glyphosate, kufaka phakathi ezinye ezinamazinga ezinsalela eziphindwe kabili kunomkhawulo ovunyelwe e-European Union, ngokusho kwemibhalo etholwe ngesicelo se-Freedom of Information Act. I-EPA ayibekanga ileveli yokubekezelela i-glyphosate kuju, ngakho-ke noma yiliphi inani liyinkinga ngokomthetho.
Naphezu kwalokho izingxoxo zangaphakathi mayelana nesidingo sokulandela isenzo ngemuva kokutholwa kwezinyosi ngoJanuwari, i-FDA ayizange yazise izinkampani zezinyosi ezithintekayo ukuthi imikhiqizo yazo itholwe ingcoliswe yizinsalela ze-glyphosate, futhi ayizange yazise umphakathi.
I-FDA iphinde yahlola ummbila, isoya, amaqanda nobisi ezinyangeni ezedlule, futhi ayitholanga noma yimaphi amazinga adlula ukubekezelelana kwezomthetho, yize ukuhlaziywa kusaqhubeka.
“Le miphumela yokuqala ayikhombisanga ukwephulwa kwezinsalela zezibulala-zinambuzane ze-glyphosate kuzo zonke izinto ezine ezihloliwe. Kodwa-ke, ukwabiwa okukhethekile kuyaqhubeka futhi yonke imiphumela kumele idlule kwinqubo yokulawulwa kwekhwalithi ye-FDA ukuze iqinisekiswe, ”kusho okhulumela i-FDA uMegan McSeveney. Ukuhlolwa kobuju akuzange kuthathwe njengengxenye yesabelo esikhethekile esisemthethweni, kusho uMcSeveney.
“UDkt. UNarong Chamkasem, ongusokhemisi ocwaninga nge-FDA ozinze e-Atlanta, uvivinye amasampula angu-19 oju njengengxenye yocwaningo alwenza yedwa, ”kusho yena.
Ukuhlolwa kwezinsalela ze-glyphosate yi-FDA kungahle kubhekiswe ekwehliseni ijubane. Imithombo ithi lapho kukhulunywa ngokuvalwa kwelabhorethri ye-FDA yase-Atlanta eyenze izivivinyo zezinsalela ze-glyphosate. Umsebenzi uzobe usudluliselwa kwezinye izikhungo ezweni lonke.
Ukudalulwa mayelana nezinsalela ze-glyphosate ekudleni okuthile kuza njengoba bobabili abalawuli baseYurophu nabaseMelika behlola imithelela ye-glyphosate engcupheni kubantu nasemvelweni. I-EPA ibambile izinsuku ezine zemihlangano maphakathi no-Okthoba nesigungu eselulekayo sokuxoxa ngocwaningo lomdlavuza oluphathelene ne-glyphosate, kanti impikiswano iyaqhubeka ngokuthi ngabe ithimba lososayensi bamazwe omhlaba ngonyaka owedlule labamemezela ukuthi i-carcinogen yabantu ngabe belilungile noma cha.
U-Aaron Blair, Usihlalo weqembu elisebenzayo le-International Agency for Research on Cancer (IARC) elibeke i-glyphosate njenge-carcinogenic kubantu, uthe isayensi ye-glyphosate isathuthuka. Uthe kujwayelekile ukuthi kuthathe iminyaka, kwesinye isikhathi amashumi eminyaka, ukuthi izimboni nabalawuli bamukele okutholakele ocwaningweni oluthile nokuthi ososayensi bafinyelele esivumelwaneni. Uqhathanise i-glyphosate ne-formaldehyde, eminyakeni eminingi eyedlule eyayiphinde yahlukaniswa yi-IARC ngokuthi "mhlawumbe i-carcinogenic" kubantu ngaphambi kokuba kamuva yamukelwe njenge-carcinogenic.
"Asikho nesisodwa isibonelo sokuthi i-IARC yenze iphutha, okukhombisa ukuthi okuthile kungaba yi-carcinogen bese kuthi kamuva kubonakale ukuthi akunjalo," kusho uBlair.
(Le ndaba iqale ukuvela ku- I-Huffington Post)
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukudla, Monsanto, izibulala-zinambuzane, I-Quaker Oats Co., RoundUp